6-da kulan ee ugu fikirka wanaagsan Android | Androidsis
Aaron Rivas | 29/04/2021 23:00 | Aaladaha Android, Ciyaaraha Android
Marnaba dhib malahan jimicsiga maskaxdeena, iyo xitaa wax ka yar in si joogta ah loo sameeyo. Intaa waxaa dheer, waa lagugula talinayaa, in kasta oo uu jiro qalad guud oo ah in waxa ay tahay in aan tababbarno, ugu horreyn-oo keliya-, uu yahay jirkeenna, laakiin runtu waxay tahay in aan si siman u qabanno. Iyo sidee uga fiican oo lagu tijaabiyo caqligeena, haynta, iyo maskaxdeena maskaxeed marka loo eego ciyaaraha?
Taasi waa sida ay tahay. Caadi ahaan waa daal iyo daal in maskaxdeenna lagu jimicsado halxidhaalayaal iyo waxyaabo la mid ah oo aan haba yaraatee wax qosol ah lahayn, waana taas sababta aan u soo bandhigno isku-dubbaridkan, oo aad ka heli doontid 6-da kulan ee fikirka ugu wanaagsan ee Android, kuwa aad ku awooddo baashaal, ku raaxeyso hab madadaalo leh, oo ah waxa ugu weyn kiiskan, jimicsiga maskaxdaada.
1 Ka fikir: Qiyaas erayga
2 Imtixaanka Maskaxda 2: Qisooyin Cajiib ah & Ciyaaraha Maskaxda
3 Waa kuma?: Enigmas, xujooyin iyo xujooyin
4 Maskaxda Ka Baxday - Ma Gudbin Kartaa?
5 Maskaxda kor
6 Maskaxda Raadinta - Caqabadaha cusub ee gubida maskaxda
Ka fikir: Qiyaas erayga
Si aad u bilowdid liistada ciyaaraha jimicsiga maskaxda ee lugta midig, waxaan kuu soo bandhigeynaa kulankaan, mid aad ku cabiri karto garaadkaaga maskaxeed isla markaana, isla markaa, aad ku horumarin karto. Intaas waxaa sii dheer, waxaad boorka ka jabi doontaa xusuustii hore ee erayada iyo meelaha, walxaha, cuntooyinka oo aad joojin doontaa tirinta waxyaabaha aadan magacaabin muddo dheer, maxaa yeelay waxay ka kooban tahay mala awaal iyo isku xirnaanta xiriirka sawirrada iyo GIF-yada u muuqda intaad xallineyso xujooyinka. Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa inaad wax ku barato, maadaama ay jiraan heerar adag oo kaliya lagu xallin karo ereyo isku murugsan.
Dhinaca kale, ma aha oo kaliya inaad xalliso oo aad isbarbar dhigto ereyada ku saleysan sawirrada iyo GIFs, laakiin sidoo kale waxaad abuuri kartaa caqabado kuu gaar ah oo aad la wadaagi kartaa asxaabtaada iyo bulshada ciyaarta. Waxaa jira in kabadan 3 oo heer oo aad xalliso, sidaa darteed waxaad heli doontaa saacado badan oo ciyaarta iyo madadaalo ah oo damaanad qaadaya, intaad maskaxdaada jimicsi ugu sameyneyso qaab ahaan.
Si wax walboo ay u socdaan si habsami leh oo aadan ku dhegin heerarka ciyaarta, Waxaad weydiisan kartaa asxaabtaada caawimaad shabakadaha bulshada sida Facebook. Adoo si fudud ugu xirmaya ciyaarta koontadaada Facebook, waxaad arki kartaa saaxiibbadaada ciyaarta ku jira, kuwa aan ahaynna waad ku marti qaadi kartaa inay ciyaaraan.
In kasta oo ciyaartani ay tahay mid bilaash ah, waxaad heli kartaa wax soo iibsasho gudaha ah oo aad uga sii horumarto si fudud oo dhakhso leh, in kastoo aysan qasab ahayn.
Developer: The FastMind Inc.
Imtixaanka Maskaxda 2: Qisooyin Cajiib ah & Ciyaaraha Maskaxda
Haddii aad tahay qof jecel halxiraalaha, kani wuxuu noqon karaa ciyaarta aad jeceshahay inta ugu badan, maxaa yeelay waxay la timaaddaa in badan oo ka mid ah kuwan si loo xalliyo, mid walbana kan kale wuu ka adag yahay. Waana inay jiraan astaamo tiro badan sida Libaaxa Boqorka, Emilia iyo beerteeda, iyo Jonás, ugaadhsadaha bahalnimada, iyo kuwa kale oo midabbada siiya iyo firfircoonaan firfircoon oo ciyaarta la socota, taas oo madadaalo saafi ah oo fudud lagu gaadho wax kasta. daqiiqad, adigoon nasin maskaxda.
Halxidhaalayaashu waa kuwo aad u khiyaano badan, sidaa darteed dareenkaaga fiiq oo si fiican u fiiri panorama heer kasta ah si aad mid walba xal ugu hesho. Maskaxda ku hay in markii aad horumar gaarto, sidii lagaa filayay, heerka dhibku uu kordho, sidaa darteed, haddii marka hore ay wax walba u muuqdaan kuwo fudud, arrimuhu si buuxda ayey isu beddelayaan markii aad horumar badan gaartid, laakiin tani way wanaagsan tahay; Sidan ayaad wax badan uga fikiri kartaa oo aad u wanaajin kartaa garaadkaaga iyo awoodaada maskaxeed ee xalinta dhibaatooyinka.
Noqo qof hal abuur leh oo hal abuur leh. Waxaa jira xalal dhif iyo naadir ah oo ku saabsan xujooyinka badan, sidaa darteed waa inaad ka tagtaa waxyaabaha caadiga ah dhowr jeer si aad u horumariso. Maxaa intaa ka badan, ciyaarta ayaa ku habboon da 'kasta, markaa waxaa ciyaari kara kan ugu yar ilaa kan ugu weyn. Tan kale waxay tahay inaadan ubaahnayn qadka internetka si aad u ciyaarto waana gebi ahaanba bilaash. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah ciyaaraha fikirka ugu wanaagsan ee hadda laga heli karo Google Play Store oo loogu talagalay taleefannada casriga ah ee Android. Sii isku day oo baashaal!
Waa kuma?: Enigmas, xujooyin iyo xujooyin
Tani, shaki la'aan, waa xujo kale oo aad u xiiso badan iyo xalinta mushkiladaha, iyo mid ka mid ah kuwa ugu soo dejisan ee lagu ciyaaro qaybteeda, oo ay taageerayaan in ka badan 10 milyan oo laga soo dejiyay Android Play Store. Iyo 1 milyan qiimeyn wanaagsan.
Halkaan waxaad ka heli doontaa ciyaaro badan oo maskaxda ah si aad u tijaabiso garaadkaaga iyo awoodaada xallinta, iyo sidoo kale xamaasadda ay tahay inaad ku xalliso waxa hortaada la soo dhigo. Heer kastaa way ka dhib badan tahay tii hore, sidaa darteed wax waliba si tartiib tartiib ah ayey u sii adkaanayaan, markaad horumarka ciyaarta ku sii socoto. Waxaa jira xujooyin badan, su'aalo adag, xujooyin, xujooyin, iyo waxyaalo qarsoon si ay kuugu maaweeliyaan, u baashaalaan, oo waqtiga u dhaafaan.
Waxaa laga yaabaa inaad isku aragto dhowr su'aalood oo khiyaano ah, oo aadan u heli doonin jawaabo aad si fudud ugu hesho. Maskaxdaada fur oo u yeelo maskaxda hal-abuurnimo si aad u awoodo inaad xalliso dhammaan halxidhaalayaasha iyo hal-ku-dhegga, maxaa yeelay waxaad u baahan doontaa wax badan oo ka mid ah hal-abuurnimadaada si aad sidaas u yeelatid, haddii kale dhibaato ayaad ku noqon doontaa. Waxaa jira dhibaatooyin la xiriira jawaabo badan iyo xaalado murugsan. Sidaa si la mid ah, haddii wakhti kasta oo aad halxiraalaha ku dhegto oo aad xal u heli weydo, waxaa jira tilmaamo iyo tilmaamo aad ku xallin karto, sidaa darteed ha ka welwelin; hufnaan la hubo.
Ku raaxeeyso astaamaha badan ee adiga iyo sheekooyinka ka dhigaya wax walba khibrad aad u kobcinaysa, adiga oo sii kordhinaya IQ-gaaga hab baashaal iyo nasasho leh maxaa yeelay waxay kaa dhigeysaa inaad isku uruujiso maskaxdaada sida ugu macquulsan.
Dhanka kale, ma noqon karto ciyaar aad u fiican iyadoo aan la helin khibrad muuqaallo wanaagsan leh, waa wax cinwaankan si fudud ugu faano. Labadaba isugeynta ugu weyn iyo sawiraduba aad ayey ufiicanyihiin, sidookale waxay kuguqabsanayaan animations aad ufiican oo kuu diyaar ah. Dhanka kale, heesaha dhawaaqa waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican, taasoo kaa dhigeysa inaad dareento khibrad aad u xiiso badan waqti kasta.
Ugu dambeyntiina, waxaa kale oo xusid mudan in lagu ciyaari karo iyada oo aan la helin qadka internetka, sidaa darteed waad ku ciyaari kartaa wakhti kasta, meel kasta. Intaas waxaa sii dheer, waad ku ciyaari kartaa Waa kuma?: Enigmas, halxidhaalayaal iyo halxiraalaha oo leh hal gacan oo keliya, maadaama loogu talagalay inay fududaato in la isticmaalo. Uma baahnid inaad labadaba u adeegsato xalinta xujooyinka iyo su'aalaha ciyaarta.
Maskaxda Ka Baxday - Ma Gudbin Kartaa?
Haddii aad tahay qof jecel ciyaaraha halxiraalaha ah oo aad jeceshahay inaad la baashaasho, isla waqtigaas oo aad maskaxdaada isticmaasho, Maskaxda Maskaxda adigaa iska leh. Waxay leedahay xujooyin badan iyo waxyaalo qarsoon oo lagu xaliyo sugitaanka adiga. Qiyaastaada iyo caqligaagu ha kula duulaan ciyaartan, hana ku kordhiyaan IQ-gaaga heer kasta oo aad dhaafto.
Waxaad heli doontaa caqabado badan si aad u tijaabiso maskaxdaada waqti kasta. Ka fikir ciyaartaan haddii aad rabto inaad si buuxda uga gudubto. Waxay leedahay boqollaal heerar, mid walbana ka adag kan kale oo leh su'aalo aan dhammaad lahayn, xujooyin iyo waxyaalo qarsoon oo lagu xalliyo. Waxaa jira dhibaatooyin kaliya leh qaraarro waalan, sidaa darteed waa inaad ka baxdid sharciga in ka badan hal jeer si aad jawaab ugu hesho mid kasta.
Su'aalaha fudfudud looma arko maqnaanshaha Maskaxda, laakiin ha ka baqin. U hibee sirdoonkaaga oo dhan iyaga si ayan kaaga adkaan oo, sidan, uga guuleysato heer kasta oo ciyaartan ah inaad ka fikirto.
Maskaxda Ka Baxday - Ma Gudbin Kartaa? waa mid ka mid ah cayaaraha ugu caansan uguna soo degsada qaybtiisa, in ka badan 100 milyan oo laga soo dejisto Google Play Store loogu talagalay taleefannada casriga ah ee Android. In kabadan 4 milyan oo qiimeyn ah ayaa siineysa ka sii socoshada bulshada weyn ee ciyaartoydeeda.
Developer: Barnaamijyada diiradda la saarayo
Hal-abuurnimada iyo caqligu waa inay is barbar socdaan haddii aad rabto inaad dheesho Maskaxda Ciyaarta waxay kaa dhigeysaa inaad wax badan fekerto, iyo in ka sii badanba markaad ka gudubto heerarkeeda badan ee adag. Halxidhaalaheeda ayaa ku madadaalin doona, intaad kordhinaysid awoodaada IQ oo aad hagaajineyso firfircoonidaada iyo awooda aad ku xalinayso dhibaatooyinka macquulka ah., inkasta oo munaasabado badan ay tahay inaad fikirkaaga la taaban karo dhaqan geliso si aad u hesho jawaabaha saxda ah ee halxiraalaha.
Tani waa ciyaar da 'kasta leh. Halxiraalaheeda waa waxqabad, heer walbana waa laga gudbay, waxaad awood u yeelan doontaa inaad maskaxdaada ku tababarto si wax ku ool ah, taasoo ka dhigeysa mid ku habboon in maskaxdaada lagu hayo qaab. Waxay sidoo kale ku habboon tahay hagaajinta xusuustaada iyo awoodaha kale ee garashada.
Maskaxda Raadinta - Caqabadaha cusub ee gubida maskaxda
Wax walba maahan sidaan u aragno. Mararka qaarkood waa inaan waxyaabo u rogno siyaabo kala duwan si aan u helno xallintooda, tanina waa wax ku habboon cayaartan sirdoonka caanka ah.
Maskaxda Raadinta waxay kuu keeneysaa xujooyinka ugu fiican, su'aalaha waalan ee jawaabaha aan la qiyaasi karin iyo kuwa maskaxda ku dhaca ee aad ka fikirto. Waxaa jira boqolaal heerar oo caqabado ku ah maskaxdaada kuwaas oo tijaabin doona maskaxdaada, caqligaaga, awooda xallinta, hal-abuurnimada iyo xusuusta. Hagaaji IQ-gaaga oo muuji sida aad caqli ugu tahay ciyaarta fekerka ah. Cayaar waqti kasta si aad waqtiga u dhaaftid oo aad ugu raaxaysatid, intaad qumbaha u adeegsanaysid.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » 6-da kulan ee fikirka fiican ee Android
WIKO VIEW 5 Plus: Falanqaynta, Tilmaamaha iyo Qiimaha